Qaybiyeyaasha budada mica ee fasalka caaga ah iyo Warshad - Shiinaha Soosaarayaasha budada mica fasalka caaga ah
Huajing budada mica-fasalka balaastigga ah, oo inta badan loo isticmaalo balaastikada injineernimada si loo kordhiyo qaabka foorarsiga iyo dabacsanaanta; Beerta qalabka balaastigga ah ee alaabada elektarooniga ah, ka dib marka lagu daro mica, waxay noqon karaan kuwo isku dhafan oo isku dhafan oo leh qaabeyn. waxay hagaajin kartaa caabbinta cimilada ee alaabada caagga ah, sidaa darteed caagagga injineernimada waxay u adkeysan karaan heerkulka weyn iyo kala duwanaanshaha deegaanka;
HUAJING sheyga taxanaha mica synthetic wuxuu qaataa mabaadi'da dhalaalida kuleylka heerkulka sare. Marka loo eego isku-darka kiimikada dabiiciga ah iyo qaab-dhismeedka gudaha, oo la soo saaray ka dib kuleylka korantada iyo dhalaalida heerkulka sare, qaboojinta iyo crystallization, markaa mica synthetic ayaa la heli karaa. Badeecadani waxay leedahay faa'iidooyinka daahirsanaanta sare iyo xajmiga, maadada birta oo aad u hooseysa, ma leh biraha culus, kuleylka u adkaysta, aashitada u adkaysata alkaliska, sidoo kale waxay u adkaysataa u nuglaanta gaaska halista ah, waxqabadka deggan iyo dahaadhka wanaagsan.
Huajing budada mica-fasalka balaastigga ah, oo inta badan loo isticmaalo balaastikada injineernimada si loo kordhiyo qaabka foorarsiga iyo dabacsanaanta; si loo yareeyo yaraanshaha .Beeraha qalabka balaastigga ah ee alaabada elektarooniga ah, ka dib marka lagu daro mica, waxay noqon karaan kuwo isku dhafan oo isku dhafan oo leh qaabeyn.
Budada miraha qallalan ee 'Huajing' ayaa ku tartamaya qiimaha oo xasiloon tayada. Nadiifinta sare ee budada mica ee ay soo saartey shiidi iyada oo aan la badalin wax hanti dabiici ah. Inta lagu jiro wax soo saarka oo dhan, waxaan qaadannaa wadarta nidaamka buuxinta ee buuxa si loo hubiyo tayada wax soo saarka;